Fepetra sy fepetra apetraky ny serivisy amin'ny asa fanompoana amin'ny ankapobeny sy ny orinasa Inc.
Ao amin'ity Fifanarahana ity ("fifanarahana") "ianao" sy "ny anao" dia manondro ny mpanjifa tsirairay, "izahay," isika, "" isika, "" GCS, "ary ny" orinasa "manondro ny General Corporate Services, Inc. (izany mitantana ireo anarana marika Orinasa natambatra, takelaka fiarovana fiarovana, orinasa any ivelany, ary koa ireo marika sy tranokala hafa), ireo mpiantoka azy, ny mpandraharaha, ny mpiasa, ny manamboninahitra sy ny mpiara-miasa ary ny "Serivisy" dia manondro ireo tolotra nomen'ny anay. Ity fifanarahana ity dia manazava ny adidinay aminao sy ny adidinao aminay satria mifandraika amin'ny serivisy ireo izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo serivisy eo ambanin'ity Fifanarahana ity dia manaiky ianao fa efa namaky sy nanaiky nanaiky hofehezinao amin'ny fepetra rehetra sy ity fepetra ity amin'ity fifanarahana ity ary misy fitsipika na politikany mifandraika na mety ho navoakanay avy. Ekenao fa valo ambin'ny folo taona mahery ianao, na teo amin'ny sehatry ny fahefanao.
Araka ny fifanarahana, ny GCS dia hanao fikarohana mialoha sy tsy misy fanakianana anarana ahafahana mamaritra raha toa ka efa ampiasain'ny orinasa iray hafa ao amin'ny fanjakana na faritany voafidinao na ny firenena i GCS. (Orinasa, orinasam-bola voafetra ary / na karazan'asa mitovy amin'izany dia ampiasaina mifanolo eto raha azo ampiharina.) Raha tsy misy ny anaran'ny orinasa voafantina anao, dia hikarakara ny GCS (araka ny filaharana notanisainao ao amin'ny fangatahananao) ny orinasa hafa anarana nomenao mandra-pahatonga ny valim-pikarohana karama anarana misy. Raha toa ka tsy tafiditra ao amin'ny orinasa mpanamboatra mety ianao (izany hoe "Inc.," "Corp.," na "Corporation") dia hampidirin'ny GCS ny "Inc." (na "LLC" ho an'ny orinasa tompon'andraikitra voafetra). fandefasanao amin'ny fanjakana, faritany na firenena voafidinao.
Ekenao fa tompon'andraikitra amin'ny tononkira nomen'ny orinasa nomenao anao ianao. Manaiky ianao fa efa nandoa indroa ny anarana (orinasa) eto dia voalahatra araka izay irinao. Fantatrao fa tsy mifamadika izany fangatahana izany aorian'ny fametrahanao ny fangatahanao.
Na dia miezaka mafy amin'ny fahazoana ny vaovao farany indrindra aza izahay, tsy afaka manome antoka isika fa ny fampahalalana farany indrindra momba ny fisian'ny anarana orinasa dia nomena anay. Noho izany, tsy manome antoka izahay fa misy ilay anarana ampiasaina amin'ny anarana orinasa orinasa any amin'ny fanjakana, faritany na firenenao. GCS dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fiantohana ny fisian'ny anarana orinasa. Ankoatr'izay dia manoro hevitra izahay mba tsy hanao pirinty taratasy, karatra fiasa na manao fampiasam-bola amin'ny anarana mandra-pahamarinan'ny governemanta anao fa nekena ny anarana ary efa naterina ny orinasa.
Raha tsy misy ny anaran'ny orinasa sy ny fifandimbiasananao ary tsy manome safidy hafa amin'ny andro ampanaovinao ianao dia manome alalana ny GCS hampiditra ny teny hoe "Enterprise," "Holdings," "Management," "Ventures," na "Renivohitra" hatramin'ny faran'ny anarana. Raha tsy misy ny fitsaboana toy izany dia ho voafetra ihany ny saram-bola omena ny GCS. Jereo eto ny fizarana REFUNDS sy KREDITSY raha mila fanazavana fanampiny.
Tsy afaka izahay ary tsy manamarina mba hahitana raha manitsakitsaka ny zon'ny hafa ny asan'ny orinasa nofidinao, na ny fampiasana anao amin'ny anaran'ny orinasa. Mamporisika anao izahay mba hamotopototra mba hahitana raha manitsakitsaka ny zon'ny hafa ho an'ny anarana ny anarana orinasa, ary indrindra manoro hevitra anao izahay hangataka torohevitra manan-talenta amin'ny fahazoan-dàlana hikasa lalàna ao amin'ny fitsarana azo ampiharina.
REHETRA SY KREDIT
Raha foanana ny kaontin'ny orinasa amerikana rehefa nalaina ny GCS, nefa alohan'ny hahavitana ny fanamarinana anarana, hamerenan'ny GCS ny vola totalin'ny fandoavana ary ny vidin'ny fanodinana $ 95 dolara. Raha nofoanana ny baiko rehefa vita ny mari-pamantarana anarana nefa alohan'ny nananganana ireo antontan-taratasim-pamoronana, ny GCS dia hamerina ny vola totalin'ny baiko latsaky ny $ 125. Raha nofoanana ny baiko taorian'ny namoronana ny antontan-taratasim-pamoronana, ny GCS dia hamerina ny fitambaran'ny baiko latsaky ny vidin'ny fanodinana $ 195 dolara raha toa ka tsy atolotra ny governemanta ny antontan-taratasim-pananganana. Ho an'ny orinasan-draharahan'ny orinasa ivelan'ny Etazonia, raha manome alalana hamerenany ny refund farany ny GCS dia ny vola voaloa kely kokoa amin'ny $ 495 na roapolo isan-jaton'ny vidin'ny fividianana. Ankoatr'izay, ny vola naloan'ny GCS izay efa naloa ny governemanta amin'ny fandefasana, amin'ny mpiara-miasa, ny mpamatsy na vola hafa hanatanterahana ny baikonao dia tsy averina, tsy tafiditra, fa tsy voafetra ihany, ny sarany fanodinana karatra.
Rehefa nalefa tany amin'ny governemanta ny orinasa na antontan-taratasim-pahefana noho ny fandefasana ny anaran'ny mpanjifa na ny fitokisana na antontan-taratasy hafa dia namboarina ny baiko tsy azo averina na hofoanana.
Ny sarany 75 $ dia hampiana amin'ny fisavana rehetra naverina any amin'ny GCS noho ny vola tsy ampy sy ny kaonty mihidy. Ankoatr'izay, ny saram-pivarotana banky dia hokarakaraina amin'ireto fisavana ireto.
Ho fanampin'izany, raha ny GCS dia hanao ezaka lehibe mba handraisana ny mpanjifantsika, mety hitranga ny hadisoana mekanika na olombelona. Noho izany, raha misy antony fangatahanao fampidirana, fangatahana matanjaka, fangatahana matoky, fitadiavana marika na fangatahana fanomanana amin'ny fivarotana marika na fangatahana hafa dia tsy mitombina, potika, diso toerana, na raha tsy izany, dia TSY HANOMPOANA ny GCS AN-TOKONY HO ANAO, NA AZONAO DIDIA FAMPITANIANA. NY FAHADIASA ATAO HOE NY GCS AZO ATAO VONINAHITRA REHETRA IZANY ARY IZAY REHETRA REHETRA HANANA NY GCS MOMBA NY FIVAVAHANA AN'ANDRIAMANITRA ANAO AZY HITANAO IZANY ARY IZANY TOKONY HITANAO IZY.
Raha misy ny famoahana maika, dia hanao ny ezaka rehetra izahay mba hamenoana ny fandefasana ny orinasa araka ny fangatahanao. Satria ny GCS dia manandrana ny ezaka rehetra hiantohana ny fahafenoana sy amin'ny fahafenoan'ny fitanisan'ny orinasa anao, tsy manome antoka isika fa ny baiko dia hapetraka amin'ny fotoana nangatahanao. Raha toa ka tsy ampiharina ara-potoana ny baiko maika anao dia ho voafetra ny famerenanao ny fandoavana fanampiny ny saram-bola fanampiny.
Raha efa nandoa tamin'ny alalàn'ny fax ianao, nijerena an-telefaonina, navoakan'ny Internet, ACH na fomba mitovy amin'izany, dia hisy fipetrahana apetraka eo amin'ny baikonao mandra-pahatongan'ny bankinay fa nesorina ny fandoavanao. Ny ora mahazatra dia telo ka hatramin'ny dimy andro fiasana, tsy tafiditra amin'ny faran'ny herinandro na fialantsasaky ny banky. Miankina amin'ny banky ity fotoana ity fa tsy GCS. Rehefa avy nahazo fanamafisana isika fa efa natsahatra ny vola dia manomboka manamboatra ny baikonao isika.
Mandeha ezaka lehibe ny GCS hifandray amin'ny mpanjifa. Na izany aza, ny hafatra an-telefaona, ny mailaka na ny fifandraisana hafa dia mety tsy mahazo valinteny zato isan-jato amin'ny fotoana.
Misy baiko napetraka amin'ny fotoana alefa any amin'ny GCS amin'ny Internet, telefaona, facsimile na mail. Ny fanovana dia tsy azo atao amin'ny alàlan'ny baiko aorian'ny fanekena raha tsy efa nahazo alalana avy amin'ny GCS. Aorian'ny fandraisana ny fanomezan-dàlana mialoha dia manan-kery ny fanovana ny baiko aorian'ny nahazoan'ny GCS sonia sy angatahana an-tsoratra avy aminao amin'ny alàlan'ny facsimile. Misy ny fandaniam-bola sy ny fandaniam-potoana mba hanatanterahana ny filaminana. Noho izany, ny fangatahana fanafoanana dia tsy maintsy apetraka ary raisinay amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana miverina amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana na amin'ny alàlan'ny contact-tranonay amin'ny https://companiesinc.com/ 24 ora alohan'ny handefasanao ny baiko ho an'ny masoivohon'ny governemanta ho an'ny fandefasana na alohan'ny fanompoana. nomena. Ny ora ara-barotra indrindra amin'ny andro faran'ny herinandro dia 6: 00 AM mankany 5: 00 PM PST tsy anisany ny fetim-pirenena.
Ny sehatra sasantsasany dia mitaky anao hanome antontan-taratasina ilaina alohan'ny hanaovana azy na alefa ny orinasa. Ireo antontan-taratasy ireo dia mety misy fa tsy mety ho voafetra amin'ny dika mitovy pasipaoro iray, volavolan-dalàna momba ny pasika, fanambaram-peo ary / na taratasim-bola momba ny banky. Amin'ny sehatra sasany dia afaka mametraka fa tsy afaka manolotra ny orinasanao ara-dalàna raha tsy manome ny antontan-taratasy ianao. Any amin'ny sehatra hafa andoavantsika dia tsy afaka mametraka ny orinasanao mandra-pahafahanao ny antontan-taratasy takiana. Ny asa sasany dia mitaky hevitra araka ny lalàna. Ny antontan-taratasy sasany dia mety mila adika amin'ny teny anglisy na fiteny hafa. Raha misy sarany amin'ireto fepetra fanampiny ireto dia tompon'andraikitra amin'izy ireo ianao. Izahay dia miaritra ny fandaniam-bola hananganana ny orinasa toy ny saram-panjakana sy ny sarin'antoka ary tsy haverina amintsika ireo sarany ireo. Ianareo kosa dia manaiky fa tompon'andraikitra amin'ny fanomezana ireo antontan-taratasy ilaina ilaina ianao, na inona na inona fangatahana, ary tsy misy ny famerenam-bola raha toa ka tsy manaraka ny lalàna tokony hatao.
Ny fahafaham-po ny mpanjifa dia midika iray na maromaro amin'ireto manaraka ireto: (1) dia ekena ny antontan-taratasy ho an'ny fandefasana sy ny rakitra natambatry ny masoivohon'ny governemanta, na (2) fa ny antontan-taratasy nibaiko dia namboarina ary nateraky ny mpitatitra mahazatra, ny fandefasana elektronika na ny fomba hafa. na (3) izay nibaiko ny serivisy dia natao. Raha misy ny voalaza etsy ambony dia marina amin'ny ampahany amin'ny filaminana, manaiky ianao fa afa-po amin'ny lamina rehetra.
MPIASA NY FIVORIANA
HITANIANTSIKA NY FANDROSOANA REHETRA, ny FINOANAO na ny NAMPANGARANA, ny FIVORIANA NA FAHADIANA NY FOTOTRA MAMPISORONANA. Ny sehatra sasantsasany dia tsy mamela ny fanaingoana ireo fahazoan-dàlana tsy misy dikany, noho izany dia tsy azo ampiharina aminao ny fanamarihana etsy ambony.
Mety misy tambin-tserasera fanampiny na haba hafa alohan'ny fotoana anaovana ny orinasanao na ny antontan-taratasinao hafa na / na nafindra aminao. Ohatra, ny Fanjakana amerikanina any Nevada dia mitaky ny lisitry ny manampahefana alefa taoriana kelin'ny ametrahana ny orinasa. Raha amin'ity fanoratana ity dia ny $ 150 sy ny fahazoan-dàlana $ 500 dia fahazoan-dàlana $ 189. Ohatra iray hafa ny fanjakana any California dia manana hetra praiminisitra indroa isan-taona ny habetsaky ny volan'izy ireo arakaraka ny vola azo avy amin'ny orinasa. Raha nividy orinasa antitra / talantalana ianao dia mety hitranga tsy ho ela ny saram-panavaozana aorian'ny fotoana nivarotanao. Satria ireo karama ireo dia tsy miankina amin'ny filana voalohany ny orinasa, ny GCS dia mety tsy handoa anao noho io fangatahana fametrahana amin'ny manaraka io ao amin'ny fenitra fandoavam-bola voalohany. Hasaina handrakitra ny fanjakana, firenena, mpandraharaha sy / na vola hafa alohan'ny daty fe-potoana ianao mba hampahatanjahanao ny orinasanao na ny sampandraharaha hafa ao anaty fanjakana na firafitra. Ianao koa amin'ny ankapobeny dia takina amin'ny fahazoan-dàlana misoratra anarana ho an'ny serivisy ara-dalàna ao amin'ny fanjakana na firenena fampidirana ary ny fahefana misy any amin'ny orinasam-piarahamonina tsirairay avy. Raha toa ka manefa anao ho fanavaozana ny orinasanao ara-dalàna ny GCS dia mitaky izany isika alohan'ny daty voatondro. Izany dia satria matetika ny fandoa onitra, ny sarany farany, ny sazy ary / na ny fanavaozana napetraka amin'ny orinasa ho tara. Ny volavolan-dalàna mialoha dia manome antsika halatra izay manampy amin'ny fisorohana ny governemanta na ny orin'asa hafa amin'ny vokatry ny tara farany. Anjaranao fa tsy an'ny GCS ny mitazona ny fitaovana ara-dalàna amin'ny toerana tsara. Misy ny vidin'ny fanavaozana ho an'ny fahatokisana iraisam-pirenena ao anatin'izany, saingy tsy voatery voafetra ihany, mpiantoka sy saram-panjakana. Raha ny fanoratana dia ny vidin'ireo serivisy ho an'ny masoivoho fisoratana anarana dia $ 245 $ isan-taona ho an'ny fanjakana amerikanina ary $ XNUMX isan-taona amin'ny faritany Kanadiana rehetra. Ny saram-panavaozana dia miovaova any amin'ny firenen-kafa. Raha tsy mandoa ny saram-panavaozana miaraka amin'ny governemanta ianao dia miditra amin'ny endrika manala baraka ny governemanta (ny terminology izay miovaova amin'ny fanjakana), izany no fambara anao fa tsy mila ilay orinasa intsony. Raha tsy ampahafantarinao ny GCS raha tsy izany amin'ny alàlan'ny fanoratana azy izay ekena an-tsoratra amin'ny alàlan'ny fitantanana, omena alalana GCS hametraka ny orinasa izay nambaranao fa tsy mila amidy intsony ianao amin'ny orinasa efa zokiolona, ​​manovà ny anarany sy / na avereno ny fijoroany.
Ny lalàna sasany dia mitaky ny orinasa iray hamoaka ny fisiany ao amin'ny gazety voatondro. Ny GCS dia afaka manatanteraka izany fiasa izany ho an'ny mpanjifa iray, indrindra raha takiana amin'ny mpampitambatra na mpikarakara ny orin'asa. Fanambarana ao amin'ny tranokalanay momba ny fiantraikan'ny fananganana "Vidiny dia misy vidin'ny famoahana izay ilaina" dia midika hoe aiza no takian'ny mpampiditra na mpikarakara. Tsy hamoaka na handoa saram-boky famoahana boky any amin'ny fanjakana sasany ny GCS, ao anatin'izany fa tsy voafetra, takian'ny famoahan'ny orinasa New York Limited Liability Company. Azonao ampahafantarina izao fa raha mangataka ny fananganana New York LLC ianao fa ny fangatahana publication dia mety ho lafo be lavitra noho ny fananganana voalohany ny LLC ary ianao no tompon'antoka amin'ireto vola ireto.
LEVITRA NA FINOANA FAHAFATESANA ARY FAHITADIANA
GCS dia serivisy fanontana Internet. Ireo fitaovana ao amin'ity tranokala ity dia misy fampahalalana momba ny fampiharana amin'ny ankapobeny ary tsy natao hanoloana ny torohevitry ny mpisolovava iray. Raha mitaky ezaka be ny mpiasantsika mba hitazomana sy hamoahana ny fampahalalana marina, ny lalàna eo amin'ny fanjakana, faritany sy federaly dia mavitrika ary mivoatra hatrany. Ankoatr'izay, ny lalàna dia misokatra amin'ny fandikana samihafa ary miovaova eo amin'ireo sehatra samihafa.
Rehefa mampiasa ny serivisy ianao dia hanao ny asan'ny mpisolovava anao manokana. Ny GCS dia mameno ny fampahalalana momba ireo endrika takiana miorina amin'ny fampahalalana izay nomenao anay taminao amin'ny fandefasana ny "Fangatahana ho an'ny Fampidirina" na ny "Formation LLC" ary apetraho ny fangatahana ilaina amin'ny fanjakana, sampan-draharahan'ny sampana na federaly. Amin'ny fanomezana anao ity tolotra ity, ny GCS, ny mpanolotsaina, ny mpisolo vava, ny solontenany ary ny mpiasa dia tsy manome fahazoan-dàlana ara-dalàna, hetra na raha tsy izany dia toro-hevitra na serivisy, ary tsy misy fanehoana na antoka, omena na ampiharina, omena momba ny lalàna na vokatr'asa hafa vokatry ny fampiasana ny serivisy na ny endriny.
GCS, ny mpanolotsaina, ny mpandraharaha, ny solontenany ary ny mpiasa dia tsy mirotsaka amin'ny fampiharana ny lalàna ary tsy afaka manome torohevitra anao amin'ny lalàna. Na dia manao ezaka be aza ny GCS ary manaja ny tsiambaratelo amin'ny vaovao alefanao aminay, dia TSY MISY FIVAVAHANA MANOKANA na tombontsoa misy eo anelanelan'ny GCS sy ianao, ary tafiditra ao anatin'izany, saingy tsy voafetra ho an'ny fifandraisana mpisolovava amin'ny mpanjifa izay mety hisy raha nifampiraharaha tamin'ny mpisolovava iray nahazo alalana ianao. .
Raha miresaka amin'ny mpisolovava iray mifandraika amin'ny GCS ianao, dia manaiky fa tsy misy tokony ho raisina ho torohevitra ara-dalàna ho an'ny tranga na ny toe-javatra iainan'ny tsirairay. Ny GCS sy / na mpisolovava mifanerasera dia manome fampahalalana amin'ny ankapobeny fotsiny, fa tsy mpanolotsaina hetra, ary tsy manana ary tsy hanome anao torohevitra momba ny lalàna, haba na fanarahana momba ny serivisy. Mila mitady torohevitra momba ny lalàna ara-dalàna sy hetra tsy miankina ianao. Ny ankamaroany na ny orinasam-piasa rehetra noforonina GCS dia natao ho tsy miandany hetra ary na ny vola azo, na avy amin'ny orin'asa na iraisam-pirenena, dia taterina amin'ny taona voaray na inona na vola na vola nesorina tao amin'ny orinasa na averina amin'ny tranga misy. fikambanana iraisam-pirenena. Ankoatr'izay, ny fampahalalana azo avy amin'ny GCS sy / na orinasa mpiara-miasa sy / na mpisolovava (s) dia tsy natao hamoronana, ary ny fifanakalozan-kevitra, fandraisana, fijerena na talen'ny tompon'andraikitra na fifaneraserana ankolaka dia tsy fifandraisan'ny mpisolovava sy mpanjifa ary ny sarany rehetra aloa. tsy azo raisina ho sarany ara-dalàna.
Toy ny raharaha lehibe rehetra, ny GCS, ny mpanolotsaina, ny mpisolo vava, ny solontenany ary ny mpiasa dia manoro hevitra mafy anao mba hifampidinika amin'ny mpisolovava iray nahazo alalana hanao lalàna ary CPA manana fahazoan-dàlana amin'ny lalàna mifandraika amin'ny fananganana orinasa, LLC, matoky. na vokatra hafa na serivisy hafa atolotray sy ny tohiny.
TAMINY, fandoavana sy fandoavan-tena
Raha jerena ny serivisy nofidinao dia manaiky ianao fa mandoa ny sarany momba ny tolotra ampiharina. Ny saram-pianakaviana rehetra averina eto dia tsy azo averina raha tsy manome hafa izahay. Raha mila jerena bebe kokoa momba ireo serivisy ianao dia manaiky ianao: (1) manome fampahalalana vaovao momba ny vaovao sy feno momba anao, araka ny notakin'ny fizotran'ny fangatahana ary (2) mihazona sy manavao izany fampahalalana izany raha ilaina hitazomana sy feno ary marina. Ireo fampahalalana rehetra ireo dia hantsoina ho mombamomba ny kaonty ("Information Account").
Ireto dia omena anay ny zatra mampahafantatra amin'ireo ankolafy ny fampahalalana momba ny kaonty toy izany. Amin'ny famenoana sy fandefasana ny fangatahana fisoratana anarana amin'ny orinasa dia manambara ianao fa ny fampahalalana momba ny kaonty ao amin'ny fangatahanao dia marina ary ny fisoratana anarana ny anarana anarana nofinofy, hatreto no fantatrao dia tsy manelingelina na manitsakitsaka ny zon'ny ampahatelony fety. Ianao dia misolo tena fa ny fisoratana anarana dia tsy voasoratra anarana amin'ny antony tsy ara-dalàna.
Raha mangataka fahazoan-dàlana ara-dalàna ao amin'ny Article an'ny Incorporation ianao izay mihoatra ny habetsaky ny ampaham-bola ekena nomen'ny fanjakana filoham-pirenena voafidy, faritany na firenena ho an'ny karama fandoavam-bola voafidy, dia tompon'andraikitra irery amin'ny rehetra ianao sy ny saram-hetra rehetra mitranga amin'ny fotoana rehetra . Ny sasany, saingy tsy ny rehetra, ny faritra dia manefa saram-pandefasana fanampiny rehefa mitombo ny isan'ny mizara sy / na fitomboan'ny sandan'ny tahiry. Anjaranao ny manadihady ny isan'ny avo indrindra ananan'ny fanjakana, faritany na firenena iray ho mendrika ny sarany fandoavam-bola farany ambany indrindra. Ny isan'ny fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny Fanekem-pivarotana anao dia voafantina araka ny fahaizanao manokana. Raha tsy hampianatra anay ianao dia ny rafitry ny tahiry mahazatra dia mizara 1500 tsy misy vidiny raha tsy hoe misy ny fanao mahazatra miovaova amin'ny faritany manokana na vitsy kokoa no manana fahazoan-dalana amin'ny saram-pamoanana kely indrindra.
Rehefa ilaina dia apetraky ny GCS antontan-taratasy any amin'ny biraon'ny governemanta mety amin'ny fametrahana azy. Rehefa mandray ny antontan-taratasim-panjakana avy amin'ny biraon'ny governemanta ny GCS, raha ny alàlan'ny GCS dia apetraho aminao ny antontan-taratasinao mifanaraka amin'ny fonosana nibaiko anao. Manaiky ianao fa ny biraon'ny governemanta, fa tsy GCS, dia mifehy ny fotoana hanafarana ny antontan-taratasin'ny orinasa ary hiverina any amin'ny GCS.
Aorian'ny fandefasana ny orinasam-bola, raha kitapo misy orinasa na boky firaketana orinasa no namboarina tamin'io baiko io dia namboarina aorian'ny fametrahana ny anaran'ny orinasa ary neken'ny governemanta. (Ny anton'izany dia tsy mety ny mandefa kitapo orinasa iray mandra-pahitan'ny governemanta ny anarana ka tsy amboarina kitapo misy anarana izay nolavin'ny governemanta.)
FAMPISORANAANA SY FIKARAKANA
Ny GCS dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fanoroana na fampahatsiahivana anao ny zavatra takiana na adidy, anisan'izany, fa tsy voafetra amin'ny tatitra fanao isan-taona, fametrahana hetra, hetra aloa, na fanjakana, faritany, faritany na fangatahana famoahana federaly na sarany mifandraika amin'ny vokatra na serivisy. manome anao. Raha amin'ity fanoratana ity, misy 3,007 any Etazonia miaraka amin'ny fepetra takiana sy fandoa maro samihafa. Noho ny isan'ny kaomina sy ny fanapahana hafa ary ny fitsipi-piovana tsy miova, adidinao ny mikaroka ny saram-pandefasana, ny hetra ary ny fepetra hafa ao amin'ny faritaninao, ny paroasanao, ny fanjakanao, ny firenena, na ny faritany hafa misy anao. Ny fandraisan'ny GCS ny vokatrao na ny serivisinao dia mifarana amin'ny fotoana anaovana ny vokatrao na serivisinao. Izay fepetra takiana na adidy amin'ny fikojakojana ny vokatrao na serivisinao dia TSY andraikitry ny GCS ary io irery no andraikitrao aminao. Anisany manokana, raha tsy hoe nanao fifanekena tamin'ny GCS ianao, dia ny fanjakanao sy ny fanjakana, faritany, faritany na volavolan-dàlana federaly mifandraika amin'ny orinasanao, LLC na vokatra hafa na serivisinao no ho andraikitrareo manokana. Voafaoka ao izany, fa tsy voafetra ihany, ny fandefasana ny fipetraky ny Chapter S Corporation misy anao. Ny taratasy fangatahana fangatahana S-Corporation dia tsy maintsy alohan'ny manamboninahitra ny orinasanao. Satria tsy manamboninahitra amin'ny orinasanao izahay, dia tsy afaka misoratra anarana sy mametraka an'io taratasy io. Na dia omena ny biraon'ny tompon'andraikitra / talen'ny mpiandraikitra / tompon'andraikitra aza dia tsy hangataka famoahana endrika toy izany isika na handray andraikitra ho an'ny orinasa raha tsy omena alalana avy amin'ny antoko sahaza an-tsoratra. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fahazoana hetra very na tara izahay na fampidinana na fihetsika hafa, raha tsy hoe mamitaka, raha ny tompon'andraikitra no tsy tompon'andraikitra amin'ny GCS. GCS dia fikarakarana antontan-taratasy sy serivisy amin'ny serivisy fa tsy hetra na orinasan-dalàna. Ny hetra sy ny filàna ara-dalàna dia tokony ho azo amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana sy mahay, mampihatra ireo mpikambana amin'ireto matihanina ireto toy ny mpisolovava sy tompon'andraikitra.
Raha toa ka mandoa sarany fanampiny ianao dia mangataka ny fanampiana anay amin'ny fanokafana kaonty amin'ny banky, dia hanao ezaka izahay hanokafana kaonty izay manome ny fahafahanao. Na izany aza, ekena fa ny GCS dia tsy mifehy ireo serivisy atolotry ny banky na banky tsy hanokatra ny karazana kaonty tadiavinao, na ny ezaka ataonao amin'ny fanatanterahana ny antontan-taratasy ilaina amin'ny banky. Ekenao fa ny banky, fa tsy GCS, dia mifehy ny hafainganam-pandehan'ny kaonty amin'ny banky na tsy hosokafana. Manaiky ianao fa tompon'andraikitra amin'ny famenoana ny rindry fanokafana ny kaonty amin'ny banky manontolo ary manome ny fampahalalana rehetra nangatahan'ny banky amin'ny fanokafana kaonty.
Matetika indrindra amin'ny tombontsoanao indrindra ny tsy hifandray amin'ny banky mandra-pahatongan'ny misokatra ny kaonty. Ny antony dia satria nahita mpanjifa matetika izahay nanao fanambarana tany amin'ny banky na nifandray tamin'ny banky tamin'ny fomba misoroka ny fanokafana kaonty.
Manaiky ianao fa tsy mampidi-doza ny GCS amin'ny politika sy ny fepetra ao anatiny, fa tsy voafetra ihany, ireto manaraka ireto: banky mandà ny kaonty misokatra, banky mandany fotoana bebe kokoa hanokafana kaonty fa tsy mila vola, banky mangataka fampahalalana bebe kokoa alohan'ny banky. hanokatra ny kaonty, ny fanovana ny politikam-bola, ny tsy fahazoana manokatra kaonty amin'ny banky izay manana sampana mandeha tsara, ny ilana fametrahana vola sy ny fangatahana amin'ny alàlan'ny mailaka fa tsy ny mandeha any amin'ny banky, ny tahiry mitaky fotoana fohy kokoa mba hiadiana amin'ny ny mpanjifan'ny mpanjifa, ny fiteny vahiny ampiasaina amin'ny banky, ny banky tsy manome ireo tolotra rehetra izay tadiavin'ny mpanjifa, ao anatin'izany, fa tsy voafetra amin'ny fahafahany mandefa vola ivelan'ny kaonty na amin'ny fisian'izy ireo na tsy fisian'ny carte de crédit na debit na ny fisian'ny tsy fisian'ny Internet miditra amin'ny kaonty, na ny banky mitaky anao mandehandeha any amin'ny banky manokana alohan'ny hisokafan'ny kaonty. Raha mitaky fitsangatsanganana ny banky dia tompon'andraikitra feno amin'ny vola rehetra sy ny fandaniana rehetra. Amin'ny toe-javatra sasany, ny safidy tokana dia ny manokatra kaonty any amin'ny banky tsy manana sampana mandeha an-tanana mety ho an'ny mpanjifa na banky tsy manana sampana fandehanana an-tongotra. Raha io karazana kaonty io izay ahafahan'ny GCS misokatra ho anao, dia manaiky ianao fa nahatanteraka ny adidiny ny GCS.
Na izany na tsy izany dia adidin'ny GCS ny famerenam-bola ny vola andoavana ny vola andoavana ny vidiny sy ny serivisy novidina ho fanampin'ny kaonty banky satria tsy afaka namoha ny kaontin'ny banky na raha tsy afa-po amin'ny safidin'ny banky ianao. Ity no raharaha na dia ny antony lehibe nametrahanao fikambanana ara-dalàna na serivisy mifandraika amin'izany aza dia ny hanokafana kaonty amin'ny banky na koa tsy hita ny fe-potoana lehibe noho ny fahatarana ny fandefasana ny kaonty. Ohatra, raha nanome baiko iray ny talenta iray sy ny kaonty banky ianao ary ny volanao tsy nisafidy ny hanokatra ilay kaonty, ny hany vahaolana dia ho an'ny GCS, amin'ny alàlan'ny safidiny, ny hamerenany fotsiny ny ampahany amin'ny sarany nandoa izay heverin'ny GCS ho an'ny kaonty banky. fanokafana, vidiny kely sy fotoana natomboka, na manome safidy banky hafa. GCS dia nanao fikarohana be dia be mba hahitana ny banky izay hanokatra kaonty raha tsy eo ianao, izay mahatsapa fa andrim-panjakana ary manolotra serivisy mety. Adidinao ny mamita ny fangatahana kaonty amin'ny banky, manome ny fahazotoana ilaina ary manome antontan-taratasy hafa takian'ny banky. Ny banky dia asaivo mametaka ny mpanjifany amin'ny hetsika ara-dalàna sy ny etika. Ny tsy fanatanterahana izany dia mety hiteraka banky very ny / fahazoan-dàlana sy / na mamerana ny fahafahany mitondra transaction amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Noho izany, tsy fantatra ny fanaovana banky amin'ny fanaovan-javatra mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny maha-izy azy.
Ny fepetra fanokafana banky mahazatra dia misy, saingy tsy voafetra, mameno ny fangatahana kaonty, fanaovana sonia karatra fanaovana sonia, manome kopia ny pasipaoronao, volavolan-dalàna am-boalohany mitondra ny adiresy fonenanao, ny antontan-taratasinao, banky ary / na firesahana matihanina. taratasy sy ny zavatra takiana hafa izay miovaova amin'ny banky. Matetika ny banky dia miantso hanamarina ny maha-azo antoka ny antontan-taratasy. Amin'ny fanomezana anao ny anarana amin'ny banky no heverin'ny GCS fa azo atao ary miezaka hatrany ny hanomezana anao antontan-taratasy fanokafana kaonty amin'ny banky, nahatanteraka ny adidiny i GCS eo ambany fifanarahana.
Raha nanome baiko fanampiny na serivisy fanampiny ianao, dia mety takiana fanampiny, duplicate, dokam-barotra azo antoka. Ohatra, raha nandidy ny kaonty amin'ny banky ianao, dia mety hitaky ny banky ny votoatin'ny karatra famantarana anao sy ny antonta-taratasiny. Ny fitsipika ihany koa dia mety mitaky mpandraharaha mpanome tolotra na orinasa iray mba hananana tahirin-kevitra momba ny zotom-po. Noho izany, mety mila manome sokajy maromaro maromaro ianao.
FANAZAVANA, TETIKASA SY FANATSARANA
Ny fitsipika eo an-toerana sy iraisam-pirenena dia natao mba hisorohana ny fanodinkam-bola sy ny fikambanana hafa na ny hetsiky ny vola tsy ara-dalàna. Noho izany, ny mpitandrim-pananana, ny banky ary ny hafa ao amin'ny orinasam-pivarotana ara-bola dia takiana mba hamantatra ireo antoko mifanaraka amin'izany fitsipika izany ary mba hialana amin'ireo soso-kevitra mifanaraka amin'ny fangatahana fanafoanana na fangatahana hafa. Noho izany, misy ny fepetra takian'ny mpanjifa izay tsy maintsy tratra. Ny mpitaiza iray dia tsy mametraka ny fepetra takiana amin'ny tokony ho izy raha toa ka mety hiteraka sazy sy / na fahazoan-dàlana hitrandrahana raharaham-barotra.
Ity manaraka ity dia lisitr'ireo sasany, fa tsy voatery ho an'ny ankamaroan'ny antontan-taratasy rehetra takiana amin'ny mpanjifa mba hahazoana fahatokisana iraisam-pirenena: ny fangataham-kaonty momba ny fangataham-pandraharan'ny mpanjifa, ny fanambaràna ny solvency, ny porofo momba ny loharanom-bola, ny tahirim-baovao azo antoka, ny vola Fanesorana ny Lalàna Fanaraha-maso, Ny Laharam-pahamehana, Ny dika amin'ny pejy misy ny pasipaoronao (na ny kopian'ny fahazoan-dàlan'ny mpamily anao amin'ny tranga sasany dia ampy) araka ny fanamarihan'ny notarim-bahoaka iray, porofo fanamarinana ny adiresinao (tokony ho vao haingana drafitrasa fampiasa amin'ny banky, fanambarànan'ny carte de crédit ary fanambarana banky - tokony ho ilay orijana fa tsy fotokopia), taratasy iray misy ny banky. Hangataka ianao hanasonia ny sasantsasany amin'ireo tahirin-kevitra etsy ambony ireo ary hanome tahadika pasipaoro voalaza etsy ambony, volavolan-dalàna iray (na ny iray hafa voalaza etsy ambony) ary taratasy iray misy ny banky. Ny lisitra etsy ambony dia natao hanomezana ohatra ho an'ireo antontan-taratasy ilaina amin'ny ankapobeny saingy tsy misy antoka fa ny antontan-taratasy hafa dia tsy ilaina ary / na fangatahana hafa.
Ianao no tompon'andraikitra amin'ny famoahana vaovao momba ny fahatokisana ny fahatokisana, anisan'izany ny fitokisana ny tany, ny fitokisana ny fiainana sy ny antontan-taratasy hafa, anisan'izany ny famoahana ireo antontan-taratasy sy ny fanampiana anarana. Isika dia tsy maintsy manomana fiomanana sy mandoa vola alohan'ny hanomezana ny fampahalalana hamenoana ny antontan-taratasy. Noho izany, ny tsy fahampanao manome ny fampahalalana ilaintsika hampidirina ny fampahalalana ao anaty antontan-taratasy dia tsy antony anton-dàlana hividianana izany noho ireo fandaniana tsy ara-dalàna ireo.
Ny kaontin'ny mpivarotra kara-bola dia ampiasaina mba hamenoana ireo mpanjifanao mandoa amin'ny karatry ny carte de crédit. Raha, raha mandoa vola fanampiny, mangataka ny fanampianay amin'ny fanokafana kaonty karatra amin'ny carte de crédit, dia hanao ezaka izahay hanokatra kaonty izay mahafeno ny zavatra ilainareo. Na izany aza, manaiky ianao fa ny GCS dia tsy mifehy ny tolotra omen'ny orinasa mpanangona kaonty, ny tolotra atolotra, na ny mpivarotra na tsy hanokatra ny karazana kaontinao tianao, na ny ezaka ataonao amin'ny fanatanterahana ireo antontan-taratasin-kaonty ilaina. Manaiky ianao fa ny orinasa mpanangona kaonty, fa tsy GCS, dia manara-maso ny haingam-pandeha izay tsy hanokatra ny kaontin'ny mpivarotra. Manaiky ianao fa tompon'andraikitra amin'ny famenoana ny fampiharana ny kaonty amin'ny sehatra manontolo ary manome ny vaovao rehetra nangatahana amin'ny fisokafan'ny kaonty.
Ny GCS dia TSY MANAFATRA TSY MISY ANTSIKA AMIN'NY FANABEAZANA AMIN'NY FANABEAZANA. MITONDRA FANASANA NY FIFANEKENA MIKASIKA NY FAMONJENA MIKASIKA NY FAMONJENA. MITADIAVANA AZO IZAY TSY MISY RESAKA TSY MISY IREO MAHATOKY AMIN'NY FANABEAZANA AMPIASAINA AMIN'NY MAHAFA-PO.
Manaiky ny hitazona ny GCS tsy mampidi-doza ho an'ny politikan'ny kaonty sy ny kaonty kaonty, fa tsy voafetra ihany, ireto manaraka ireto: orinasam-pivarotana mpivarotra no mandà ny kaonty misokatra, orinasam-pivarotana mpivarotra iray izay manokana fotoana bebe kokoa hanokafana kaonty mihoatra noho ny faniriana, kaonty fivarotana ny orinasa mangataka fampahalalana bebe kokoa alohan'ny hanokafany ny kaonty, ny fangatahana banky takiana voalohany, ny fiovan'ny politika, ny tsy fahafahana manokatra kaonty amin'ny tahan'ny faniriana, ny tsy fahafahana manokatra kaonty fivarotana amin'ny teny tianao, ny orinasam-pivarotana mpivarotra tsy manome ny tolotra na ny tombam-bidy rehetra izay anirian'ny mpanjifa, anisan'izany, fa tsy voafetra ny, sara, tahiry, politika sy mpivarotra.
Amin'ny toe-javatra sasany, ny safidy tokana ihany dia ny manokatra ny kaonty momba ny mpivarotra amin'ny orinasa iray izay miakatra ambony noho ny tahan'ny fari-piainana. Marina indrindra izany raha toa ny orinasa mpanangona kaonty no mihevitra ny orinasa ho "sokajy avo lenta", na inona na inona raha tsapan'ilay mpanjifa ny orinasa dia mety hampidi-doza na raha toa ka manana tantara madio na rakitsoratra ny mpividy. Raha ity no karazana kaonty azon'ny GCS afaka misokatra ho anao, dia manaiky ianao fa ny GCS dia nahatanteraka ny adidiny.
Raha tsy misy ny GCS dia tsy maintsy manefa ny saram-panafody rehetra voavidy ho an'ny vokatra sy ny tolotra novidina fanampiny ankoatra ny kaontin'ny mpivarotra karatra satria ny orinasa mpanangona kaonty dia tsy afaka misokatra na tsy afa-po amin'ny safidin'ny orinasam-pivarotana mpivarotra . Izany no zava-misy na dia ny antony lehibe indrindra nametrahanao antokon-dalàna na nomena tolotra fanampiana dia ny hanokafana kaonty karatra amin'ny carte de crédit, na tsy nisy ny fe-potoana manan-danja noho ny fisokafan'ny fanokafana kaonty. Ohatra, raha nandidy orinasa iray sy kaonty momba ny varotra ianao ary ny orinasan'ny kaontin'ny mpivarotra dia tsy nety nanokatra ny kaonty na fiampangana avo lenta mihoatra noho ny fanirianao, ny fanafody irery dia ho an'ny GCS, amin'ny safidy azony, hamerenana ny ampahany amin'ny sanda nandoavam-bola fa ny GCS dia mihevitra ny famoahana ny kaontin'ny mpivarotra na ny ampahany amin'io sanda io, tsy dia mivoaka amin'ny fandaniana pocket, na manome anao ny safidin'ny kaonty hafa. Ny sandam-bola aloa amin'ny fananganana kaonty iray dia nomena ny antoko fahatelo hitarika ny fanombanana ny risika, ka matetika no tsy azo refesina ny saram-pandaharana hametrahana mpivarotra. Ny GCS dia nanao fikarohana lalina mba hitadiavana ny orinasa mpanamboatra kaonty izay hanokatra kaonty ho an'ny orinasa ambany, mahazatra ary avo lozam-pifamoivoizana, izay mahatsapa fa misy rafitra ara-dalàna ary manolotra tolotra ara-dalàna. Amin'ny fanomezana anao ny anaran'ny orinasa mpanangona orinasa mpikarakara ny kaonty, ny GCS dia tena azo atao ary manao ezaka mba hanomezana anao dokam-barotra fanokafana na taratasim-bola, ny GCS dia nahatanteraka ny adidiny tamin'ity fifanarahana ity.
Ny programa momba ny birao, izay matetika dia misy laharan-telefaona, laharana fax sy adiresy no atolotra ho tombontsoan'ny mpanjifa. Ny nomeraon'ny nomeraon-telefaona dia matetika ny telefaona nozaraina valiana ho an'ny orinasa maro. Noho izany, ny antokon'ny fiantsoana dia tsy maintsy mandao ny anaran'ny orinasa izay iantsoany azy mba hahafantarantsika ny olona tokony halefa ny hafatra. GCS dia tsy tompon'andraikitra amin'ny mailaka very, tsy misy antso an-telefaona, faxes, orinasan'ny orinasa na noho ny fahaverezana na inona na inona. Mazava ho azy fa tsy misy ny famerenana amin'ny laoniny raha toa ka manomboka ny serivisy satria ny GCS dia miantoka ny vidin'ny fandaharam-piantsoratry ny birao.
Ireo fepetran'ny tolotrasa ireo dia mamaritra ny votoatiny sy ny fetran'ny adidin'ny orinasa amin'ny mpanjifa sy ny fampiasana ara-pitaovana amin'ny Services sy ny vokatra amin'ny Customer. Ny orinasa no solontenan'ny filoha tokana sy farany amin'ny resaka fandikana ny fifanarahana. Amin'ny fampiasana ny Sampan-draharahan'ny orinasa sy ny vokatra, ny mpividy dia manaiky fa voafatotry ny fepetra voalazan'ity fifanarahana ity.
Raha manome baiko, ny orinasa dia hanome orinasa orinasa na orinasa tompon'andraikitra tompon'andraikitra amin'ny mpanjifa. Ny orinasa dia hanome ny mpanjifa amin'ny fonosana entana amin'ny alàlan'ny mailaka na ny fandefasana baiko. Ny Customer dia tompon'andraikitra amin'ny famenoana ny fonosam-piarahamonina azo antoka ary hamerenana azy tanteraka amin'ny orinasa. Raha vantany vao tafapetraka amin'ny orinasa ny taratasy fandraisana (izay manondro taratasy fangatahana sy / na antontan-taratasy hafa), dia halefa any amin'ny orinasa ny fampahalalana ho an'ny Dun & Bradstreet miaraka amin'ny tanjona, fa tsy manome antoka azy, hanolotra ireto tolotra manaraka ireto :
1. Manome sehatra momba ny fandraharaham-barotra amin'ny orinasa iray na birao fandraharahana momba ny orinasa iray.
2. Ataovy haingana ny fizotry ny fananganana orinasa ataon'ny orinasa na ny mpiara-miasa izay mandoa saran-dàlana mankany amin'ny birao fandatsaham-bola any an-tsekoly raha toa ianao ka nandoa ny tolotra maika.
3. Manomeza portfolio-ny Dun & Bradstreet (D & B).
4. Mamoròna ny tatitra momba ny kaonty DN B amin'ny 6.
5. Amboary ny dingan'ny 5 D & B sy ny valiny amin'ny tatitra 6.
6. Ampidiro ny fampahalalana D & B izay nangatahany mba hamoronana D & B sy ny isany.
7. Ampio amin'ny mpanjifa mametraka ny referanso momba ny varotra 4-6 ho an'ny orinasa.
8. Jereo ny portfolio-n'ny karajia 6 D & B.
Ny mpividy dia hanao izao manaraka izao:
1. Ampiasao ny fonosam-piarahabana azo antoka ary avereno any amin'ny orinasa Company.
2. Omeo ny fampahalalana rehetra nangatahin'ny orinasa sy / na ny orinasany mba hamitana ny mombamomba ny bola.
3. Araho ny tari-dalan'ny orinasa sy / na ny orinasa ao amin'ny dingana famaranana momba ny asa vita.
Ny orinasa orinasa orinasa orinasa iray orinasa dia orinasa, orinasa na orinasa hafa mitovy amin'izany izay napetraka tamin'ny daty farany.
Ny fampiasana ny orinasan'ny orinasan'ny orinasa sy ny vokatra dia miompana amin'ny mpanjifa. Ny orinasa tsy miankina na ny mpiara-miasa aminy, ny mpiara-miasa, ny mpividy, ny mpiara-miasa, ny mpividy, ny mpandraharaha, ny mpandraharaha, ny fiantohana ny fiantohana ny fiantohana na ny fiantohana amin'ny tombana manokana, Sady tsy manao fiantohana Ary ny amin'ny vokatra mety ho azo avy amin'ny fampiasana ny ORINASA NY SAMPAN-DRAHARAHA SY vokatra na ny amin'ny marina, OR azo itokisana ny filazalazana fanompoana na entam-barotra ao OR azo avy amin'ny alalan'ny orinasa fanompoana na ara-tantara toerana misy ilay orinasa Miantona TSY MISY MITOVY AMIN'IZAO TONTOLO IZAO. Anisan'izany ny fahafatesan'ny olona raharaham-barotra, na vokatry ny fahatarana, na ny tsy fahafahany mba hitady mampisambotra vonona ny tahirim-bola A raharaham-barotra na tsia vokatry ny orinasa sy ny mpiasa na CAUSES.THERE tsy OTHER fifanarahana am-bava na raha tsy izany raha tsy voarakitra etoana. Ny orinasa dia TSY MISY ARA-PANAHY TSY MISY IREO FANABEAZANA MOMBA NY FITANTANANA HO ANTSIKA. MAMPITANDRINA NY FANABEAZANA ARA-DALÀNA. Ny mpividy dia tompon'andraikitra amin'ny fampiasana ny kaontin'ny famindram-bola amin'ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana sy ny fanirian'ny mpampiasa. Ny LOHATENY EO AMIN'NY VONDRONA AMIN'NY AGAIN / ORGANIZERINA AO ANATINY dia TSY MISY TSY MISY MALAGASY NY ORINASAN'NY FIRENENA ETO MADAGASIKARA ary TSY NAHAFINARITRA NY FIVAVAHANA.
NY hany fitambaran'ny madio NY ORINASA HO AN'NY REHETRA filazana atao amin'ny mpanjifa, na antoko hafa, na inona na inona endrika, anisan'izany MISY HAMPITOERANA NY ASA mifototra amin'ny fifanarahana, tort NA henjana madio, tsy hatao mihoatra ny tontalin'ny REHETRA sarany SY PIAMPANGANA Paid AMIN'NY ORINASA TSY MISY LAMIN'IZAO TONTOLO ITY AMIN'NY MIRALENTA. Ireo tolotra voalaza etsy ambony ireo dia afaka mandray ny 120 amin'ny 180 andro ara-barotra amin'ny daty naverin'ny mpanjifa ary ny orinasa dia mandray ny pake tsara azo atao.
FAHATSIAROVANA AZO ANTOKA NY FAMPIHARANA NY FIKARAKARANA ARA-PIRENENA, TSY MANAIKY AZA MIFANARAKA NY FIKORONTANAN'NY FIKORONTANAN'NY FIKORONTANAN'NY CREDIT MANDRAKIZAY MANDRAKIZAY MANDRAKIZAY MOMBA NY MALAGASY SY NY FIHAONAN'NY FIANGONANA. MITONDRA NY FAHATSIAROVANA IZANY IREO FAMPIANARANA MOMBA NY FAMPIHARANA MOMBA NY MIRALENTA EO AMIN'NY DRAFITR'IZAO TONTOLO IZAO. TANJONA FOTSINY NY FILAZANTSARA AZO AMPIASAINA AO ANATIN'NY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY FIKAMBANANA MIKASIKA NY FAMPIHARANA NY FIKAMBANANA MIKASIKA NY FIKAMBANANA MIKASIKA NY FIKAMBANANA MIKASIKA NY FIKAMBANANA MIKASIKA NY FIKORONTANAN'NY CREDIT SY MITANDRINA NY FITSIPIKA NY FIFANEKENA. NY ORINASA Afaka mametraka tsara ilay fanazavana bola tatitra AGENCY fa tsy mifehy ny heviny ny angon-drakitra, noho izany tsy manao antoka dia mandika ny hevitry ny fanekena toy ny manome ny tatitra, isa SY naoty izay nifalianareo, sady tsy ny orinasa manome antoka eo ambony SINGA NASIANA TSY MANAIKY AZY IZANY TSY MANAIKY AZA TSY MANAIKY AZY IZANY. Ny saram-panafody amin'ny ampahany amin'ny fananganana trano fanoratana dia tompon'andraikitra amin'ny mpanjifa. Ity manaraka ity dia tsy azo alaina amin'ny COMPANY satria izy ireo dia sampana nomen'ireo orinasa antoko 3rd. Anisan'izany ireto, fa tsy voafetra ho an'ny D & B ny fandoavam-bola avy amin'ny zero hatramin'ny sivy amby sivinjato dolarin'ny sivy, ny kaontin'ny varotra, ny vidin'ny vokatra avy amin'ny mpivarotra, ny saram-pandefasana STATE, ny saram-pandraharahana ara-barotra, ny telefaona orinasa na orinasa hafa mifandray ny saram-bola, ny tatitra manokana momba ny bola, ny saram-pandraharahana amin'ny banky ary ny saram-panafody hafa izay mahazatra ny fampiharana ny asa. Ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia ny saramana izay tokony andrasan'ny olona rehetra mikasa ny hanao raharaham-barotra.
Ny mpanjifa dia mahatakatra ary manaiky fa tsy maintsy miara-miasa tanteraka amin'ny COMPANY izy amin'ny fikarakarana ity raharaha ity, manao izay rehetra ilaina mba hanomezana ny COMPANY amin'ny fampahalalana nangatahin'ny COMPANY; Ankoatra izany, ny mpanjifa dia handao ny SERVICE eo ambany fitarihana sy ny fifehezan'ny COMPANY raha toa ka mbola manan-kery io fifanarahana io, ary ny mpanjifa dia tsy manome fampahalalana ho an'ny orinasa hafa na olona tafiditra na tsy mifandray mivantana amin'ny olona hafa na fikambanana momba ny raharaha afa-tsy amin'ny alalàn'ny orinasa THE COMPANY AZY IZAY MAHATSIARO NY FAHALALANA ARA-DALANA.
Ankoatra izany, ny Customer dia manaiky ny handoa vola amin'ny raharaham-barotra sy ny kaonty rehetra ao an-tsenany, anisan'izany ny kara-bola, ny karatra, ny kaontim-bola ary ny fampindramam-bola. Ny mpanjifa dia manaiky fa tsy tokony hampiharina amin'ny banky fa tsy manome alalana ny orinasa THE COMPANY. Ny mpividy ihany koa dia manaiky fa ny habetsaky ny fahazoan-dàlana aterin'ny orinasa dia asaina ho mpanolo-tsaina hanampy ny fitadiavana dia ny totalin'ny ezaka rehetra ataon'ny mpanjifa sy ny COMPANY.
Hatramin'izao, ny orinasa dia manohana ny zo hanova ny fifanekena amin'ny fotoana sy amin'ny fotoana rehetra ary ny fanovana tahaka izany dia mety mahomby hatrany amin'ny mpanjifa rehetra raha raisina amin'ny orinasa ary navoaka tao amin'ny pejy mifanaraka amin'ny https: // companyinc .com / na ny toerana manaraka raha toa ka afaka manavao ny tranonkala.
Na dia ny anaranao na ilay olona tianao hotratrinao aza dia hiseho amin'ny antontan-taratasy izay handefasana ny orinasa ho anao na ny solontenanao, dia manaiky ianao fa ny anaranao na ny solontenanao dia mety tsy ho hita ao amin'ny lahatsoratra fampidirana na ny fikambanana. Misy antontan-taratasy misaraka izay mandefa ny orinasa ho anao na ny mpanafaka anao. Io dia mitovy mitovy amin'ny anaran'ilay mpanamboatra fiara izay mitoetra ao amin'ny fiara, avy eo ny rakitra an-tsoratra izay nampiasaina ho famindrana ara-dalàna sy mandidy. Toy izany koa, izahay na ireo solontenanay dia mamorona orinasam-pandraharahana ho toy ny mpandraharaha ?? ary mamolavola orinasa andraikitra voafetra toy ny mpikarakara ?? ary avy eo dia mamoaka rakitra izay mamindra ny orinasa aminao. Amin'ny toe-javatra sasany, ny orinasa na olona hotondrointsika dia ny tompon'andraikitra voalohany, tale, mpikambana na mpitantana ny orinasa. Manaiky ianao fa ny fandefasana ny orinasa ho anao dia toa hita ao amin'ny antontan-taratasy famindrana fa tsy ny lahatsoratra ihany.
Raha nanome baiko ny serivisy iray izay misy ny mail nalefanao ianao, dia handoa tapakila sy handefa ireo entana izay nalefa taminao. Ny fametrahana dimy dolara amerikana, na mihoatra raha lazainao, dia hampidirina amin'ny saram-pandefasana mailaka alefanao. Io fanisam-bola io dia havaozina amin'ny fankatoavanao. Azonao atao ihany koa ny manome alalana ny carte de crédit amin'ny finday handrakofana ny saram-pandefasana entana ho an'ny entana.
Mety misy saram-pitsaboana hafa mifandraika amin'ny baiko izay azontsika angatahana izay tsy voatanisa ao amin'ny tranokalantsika. Ireo saram-pianarana ireo dia mety ho amin'ny fandefasana entana hafa, fifanarahana ara-dalàna, fifanarahana fanangonana, fanavaozana ny saram-pandraharahana, na saram-pianarana hafa na zavatra tsy ampoizina izay mety misy ifandraisany amin'ny baikonao na ny fitomboan'ny zavatra takiana amin'ny pocket izay noraisintsika talohan'ny navoakanay Nohavaozina ny vidiny. Ireo adiresy ao amin'ity tranonkala ity sy ireo tranonkala mifandraika dia mety na mety tsy ho tratra aoriana. Ny solontenan'ny orinasa na solontenan'ny orinasa dia miasa any amin'ny toeram-ponenana lavitra, fa tsy any amin'ny toeram-piasana. Ny adiresy sasany dia raketina ary sary, anisan'izany fa tsy voafetra ny sarin'ireo trano, dia aseho amin'ny tanjona ara-tantara ary tsy misolo tena ny sata misy ankehitriny. Azafady azafady mba hifaneraseranao solontenan'ny adiresy tokony aloanao alohan'ny handefasana taratasy fangatahana. Ny General Corporate Services, Inc. dia nalefa tany June ny fahavalo tamin'ny taona fahasivy amby enimpolo tao amin'ny fanjakana Etazonia tao Nevada. Ny tompon'ny orinasa amin'izao fotoana izao dia nahazo izany na tamin'ny Janoary ny fahatelo tamin'ny taona 2000 sy valo taona. Ny orinasa dia tsy teo amin'ny seha-pandraharahana amin'izao fotoana izao nandritra ny androm-piainany. Ny anaran'ny orinasa dia niova ary ny orinasa dia novelomina, novaina ary naverina indray. Manaiky ianao fa tsy miankina amin'ny taonan'ny GCS ho antony iray amin'ny fitantanana raharaham-barotra miaraka aminay. Ity fifanarahana manontolo ity dia misy fiantraikany amin'ny fifanakalozana ankehitriny sy ny ho avy eo amin'ny antoko.
Manaiky ianareo fa mety hanova ny fepetra sy ny fepetra amin'ity fifanarahana ity ary hanova ny serivisy omena amin'ity Fifanarahana ity. Ny fanitsiana na fanovàna toy izany dia hamatotra sy hanatanteraka avy hatrany rehefa mamoaka ilay version navaozina. Fifanarahana na fanovana amin'ny serivisy ao amin'ny tranokalantsika, na amin'ny fampahafantarana anao amin'ny alàlan'ny mailaka na mailaka tsy tapaka. Manaiky ny hanamarina ny tranokalantsika isika, ao anatin'izany fifanarahana izany, amin'ny fomba mahazatra hahafantarana ireo fanovana rehetra ireo. Manaiky ianao fa, amin'ny fampiasana ny Sampan-draharahantsika manaraka ny fampandrenesana ny fanavaozana amin'ity Fifanarahana ity na ny fanovana ny serivisy, dia mitazona izany fanovana na fiovana izany ianao.
Manaiky ianao fa ny andraikitra manontolo, sy ny fanafahana anareo manokana, mifandraika amin'ny tolotra rehetra omena eto amin'ity fifanarahana ity, ary ny fandikana ity fifanarahana ity dia voafetra ihany ny habetsaky ny vola laninao amin'izany. Ny GCS dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana mivantana, indirect, hafa, manokana na vokatry ny vokatra azo avy amin'ny fampiasana na tsy fahaizana mampiasa ny Sampandraharaha na amin'ny fividianana ny solo-tena. Satria ny fanjakana sasany, ny faritany na ny firenena dia tsy mamela ny fanilihana na ny famerana ny hetra ho an'ny loza manimba na loza hafa, any amin'ny fanjakana toy izany, any amin'ny faritany na firenena, dia voafetra ny fepetra takian'ny lalàna. Raha vao vita ny fanoratana anarana amin'ny anaran'ny orinasa, dia tsy azo esorina izy ireo ary tsy azo avotana. Alohan'ny handefasana ny baiko, dia avereno manamarina ny tsipelina sy ny fahamarinan'ny anaran'ny orinasa.
Ny GCS dia manavakavaka ny fahaverezana na ny fahavoazana vokatry ny, fa tsy voafetra amin'ny: (1) fatiantoka na ny tompon'andraikitra vokatry ny faharetan'ny fidirana na ny fampidirana fidirana; (2) ny fatiantoka na ny fahazoan-dàlana vokatry ny tsy fanomezana na ny angon-drakitra data; (3) na fahavoazana na vokatry ny asan'Andriamanitra; (4) na vokatry ny fahadisoana, ny fahadisoam-panantenana na ny tsy fisian'ny fampahalalam-baovao sy ny fampahalalam-baovao rehetra voalaza ato amin'ity fifanarahana ity.
Manaiky ianao fa tsy ho tompon'andraikitra amin'ny fahaverezan'ny fisoratana anarana sy ny fampiasana ny anaran'ny orinasam-panjakana, na amin'ny fampiatoana ny orinasa, na ny vokatra azo avy amin'ny indostria, manokana, na mahavariana, na vokatry ny vokadratsy na inona na inona. ny asa na ny fifanarahana, ny manaratsy (anisan'izany ny tsy fitandremana), na raha tsy izany, na dia notoroana antsika aza ny mety hisian'ny fahavoazana toy izany.
Manaiky ny hanafaka, hamonoana, ary hitazona anay, ny mpiantoka, ny mpiasa, ny mpiasa, ny manamboninahitra, ny tale, ny tompony ary ny mpiara-miasa izay tsy mampaninona na inona na inona amin'ny lafin-bola rehetra, ny filazana sy ny fandaniana, anisan'izany ny saram-pandraharahana, ny antoko fahatelo mifandraika amin'ny fisian'ity fifanarahana ity Ny serivisy nomena anao na ny fampiasanao ny Sampandraharaha, anisan'izany ny fanitsakitsahana anao noho ny fananana ara-tsaina na zo hafa manan-danja ny olona na ny iray, na ny fanitsakitsahana ny fitsipika mifehy na ny politika mifandraika amin'ny serivisy nomena . Raha toa ny GCS dia atahorana ny fanararaotan'ny antoko fahatelo, dia mety hitady fanomezan-toky an-tsoratra avy aminao ianao momba ny fampanantenanao hamela antsika. Ny tsy fahombiazanao hanomezana ireo fanomezan-toky ireo dia heverina ho fanonganana ny fifanarahana misy anao.
Manaiky ianao fa ny tsy fahombiazan'ny fahazoan-dàlana amin'ity fifanarahana ity dia mety ho heverintsika ho fanitsakitsahana ara-bola ary mety hanolotra taratasy fampahafantarana, manoritsoritra ny fandikana anareo. Ny fandikana rehetra ataonareo dia tsy azo lazaina ho fialantsiny fotsiny satria fotsiny hoe tsy nanao asa am-piandohana ho setrin'izany, na ny hafa manimba anao.
Ny GCS dia mikasa hanome ny vidiny ara-drariny sy mifaninana. Ny GCS dia miaro ny zo hanova ny rafitry ny prix amin'ny fotoana tsy misy filazana. Ohatra, ny taham-pahaizana iray dia azo lazaina ho fanavaozana ny rafitry ny orinasa raha toa ka tapitra ny fifanakalozana voalohany, saingy mety mitranga izany raha mitranga ny fanavaozana noho ny tsy nampoizina ny saram-pitateram-panjakana na ny vidin'ny pocket, na ny hafa antony. Ny fanambarana nataon 'ny GCS fa ny fihaonantsika sy / na ny fifaninanana fifaninanana dia ny handikana azy raha mandika tsy tapaka ny fifaninanana ny mpifaninana ary manakana ny zo hiteny ny vidin'ny mpifaninana amin'ny safidy GCS. GCS dia tsy voatery hamerenana ny fahasamihafana eo amin'ny vidin'ny GCS sy ny mpifaninana rehefa vita ny fivarotana.
TSY MISY GUARANTEE
Manaiky ianao fa, amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana na famandrihana ny anaran'ny orinasa voafantina anao, ny fisoratana anarana na ny famandrihana dia tsy manome ny tsy fahampian'ny fanoherana ny fisoratana anarana, famandrihana na fampiasana ny anaran'ny orinasa. Ankoatr'izay, mety tsy hiantehitra amin'ny hoe ny orinasanao dia efa napetraka, ary tsy tokony ho ny karapanondran'ny fandraharahana, ny taratasy am-bava, na ny fandaniana hafa izay mitondra ny anaran'ny orinasa nomena anao aorian'ny nahaterahanao nahazo ny antontan-taratasy nosoratan'ny fanjakana, fanjakana, faritany na federaly. . (Ny fanjakana sasany, faritany na firenena dia hanome ny "Certificate" momba ny fampandraisana, ohatra).
Manaiky sy manome toky ianao fa ny fampahafantarana nomenao anay hisoratra anarana na hamandrihana ny anaran'ny fikambanana dia, amin'ny tsara indrindra amin'ny fahalalanareo sy ny finoanareo, marina sy feno, ary ny fanovana amin'ny ho avy ho an'ity vaovao ity dia omena antsika amin'ny fotoana mety fomba arak'ireo fomba fiasa fanovana amin'ny toerany amin'io fotoana io. Raha napetraka tamin'ny solotenan'ny solontenanao ny baiko, dia hanao ezaka be izy mba hanoratra vaovao marina momba ny anaran'ny orinasa nofidinao, ny anaranao, ny adiresinao ary ny fampahalalana hafa. Na izany aza, diso ny diso na diso hevitra. Hahatontosa ny GCS tsy manan-tsiny ianao noho ny fahadisoana na ny fandikana diso. Ny safidy tsara indrindra dia ny hanomezanao ny fampahalalana amin'ny alàlan'ny mailaka na fitaovana elektronika hafa hanampy amin'ny fanamoram-pahamendrehana bebe kokoa. Manaiky ianao fa ny fampiasanao ny Services dia irery amin'ny risika manokana. Manaiky ianao fa ny Tolotra (s) toy izany dia omena amin'ny "toy ny", "amin'ny maha-misy" azy. Manambara mazava tsara ny karazana fiantohana rehetra, na maneho na miseho mazava tsara, anisan'izany ny famerenana ny vidy tsy maintsy atao, ny fitadiavana tanjona manokana sy tsy fanitsakitsahana. Tsy manome antoka izahay fa ny Ministera dia hanome ny fepetra takianareo, na ny serivisy dia ho tonga ara-potoana, azo antoka, na fahadisoana maimaim-poana; Ary tsy manome antoka antsika ny vokatra azo avy amin'ny fampiasana ny Sampan-draharaha na ny fahamarinan'ny fahamendrehana na ny vaovao azo.
Izahay, amin'ny fisainanay irery ihany, dia miaro ny zo handà tsy hisoratra anarana na hamandrika ny anaran'ny orinasa voafidy aminareo. Amin'ny tranga izay dia nandà tsy hisoratra anarana na hamandrika ny anaran'ny orinasa izahay, dia manaiky izahay fa hamerina amin'ny laoniny ny sanda mety hampiasaina. Manaiky ianao fa tsy hizaka ny famoizana na ny fahavoazana mety hitranga amin'ny fandoavantsika ny anaran'ny orinasa.
Ny lohatenin'ny sokajy voarakitra ato anatin'ity fifanarahana ity dia natao ho an'ny tanjon'ity andininy ity ary tsy hisy fiantraikany amin'ny dikany na ny dikantenin'ilay fifanarahana.
Raha toa ka tsy misy fepetra ny fepetra voalazan'ity fifanarahana ity, dia faritana na voafafa ny fepetra toy izany amin'ny fe-potoana farafaharatsiny mba hahafahan'ilay fifanarahana ho amin'ny heriny manontolo sy ny vokany.
Manaiky ianao fa ity Fifanarahana ity dia misy fifanarahana feno sy tsy misy afa-tsy eo amintsika sy amintsika momba ny Services. Ity fifanarahana ity dia nanasonia ny fifanarahana sy ny fahatakarana teo aloha, na napetraky ny fomba amam-panao, ny fampiharana, ny politika na ny teo aloha.
Ity fifanarahana ity dia miditra ao amin'ny fanjakana amerikana ao Florida ary hajaina araka ny lalàn'i Florida, anisan'izany ny lalàna mifehy ny lalàna. Ny antoko tsirairay amin'ity fifanarahana ity dia manome ny fahefana tokana avy amin'ny Fitsarana momba ny fanjakana sy ny federasiona miadidy ao amin'ny kaominin'i Broward ao amin'ny faritanin'i Floride, ary mandà ny fanakatonana forum rehetra, toerana, na tsy fetezan'ny forum ho an'ireo fitsarana ireo. Amin'ny fepetra rehetra hampiharana io fifanarahana io, ny antoko mpanan-dalamby dia manan-jo handoa vola amin'ny saram-pitsarana sy ny saram-pandraharahana.
Ity fifanarahana ity dia ny fifanarahana manontolo misy anao sy ny GCS ary manoloana ny fifanarahana mialoha, na am-bava na an-tsoratra, eo aminao sy GCS.
-Misaotra anao amin'ny fisafidianana ny General Corporate Services, Inc. sy ny marika fiaraha-miasa toy ny asa fanoratana anao.
Azafady, tsidiho azafady mba hifanerasera aminay amin'ny fanontaniana na zava-manahirana azonao.
Fifandraisana elektronika: Fomba fangatahana feno eto amin'ity pejy ity